बुधबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ? – Khabar Chautari
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १५, २०७७ समय: १४:५९:२०
बुधबार:१. बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरु शान्त, विदुषी र बिजनेश माइन्डका हुने गर्दछन् ।२. तपाईंको जीवनमा योजनाहरुको कुनै स्थान नभए पनि तपाईं निकै सुव्यवस्थित तरिकाले काम गर्न चाहनुहुन्छ ।३. तपाईं सफा र स्वच्छ विचारधाराका मालिक हुनुहुन्छ ।४. तपाईंलाई नयाँ–नयाँ कुराहरु जान्न निकै मन लाग्छ।. तपाईंको कुरा गर्ने तरिका निकै प्रभावशाली छ ।६. तपाईंहरु कुनै पनि कुरामा त्यति तना वमा नहुने भएका कारण तपाईंहरु जीवनमा निकै सन्तुष्ट हुन्छ ।७. सकारात्मक सोच सँगै जीवनमा अघि बढ्ने तपाईंहरुले निकै सफलता हात पार्नु हुन्छ ।
प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा पाँच दिनदेखि लागेको भिषण डढेलो पाथीभरा मन्दिरमा पुग्यो तर मन्दिर केहि भएन
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा पाँच दिनदेखि लागेको आगलागीले ठूलो रुप लिन थालेको छ । आइतबार आंशिक रुपमा नियन्त्रणमा आएको आगलागी आज बिहान मन्दिर परिसरमा नै पुगेको छ ।